ကျွန်​​တော်​တို့ မိသားစုက တော်​​တော်​ချို့တဲ့တာဗျ ဘယ်​​လောက်​​တောင်လဲ ဆိုရင်​အိမ်​မှာပိုက်ဆံ​ကလွဲရင်​တခြားဘာမှမရှိဘူး – Cele Channel
ကျွန်​​တော်​တို့ မိသားစုက ​တော်​​တော်​ ချို့တဲ့တာဗျ။ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ ချို့တဲ့သလဲ ဆိုရင်​ အိမ်​မှာ ​ပိုက်ဆံ​က လွဲရင်​ တခြား ဘာမှ မရှိဘူး။ အ​ဖေနဲ့ အ​မေ ဆိုရင်​လည်း တစ်​​နေ့ တစ်​​နေ့ ​ငွေ​ရေတဲ့ အလုပ်​နဲ့ပဲ မိုးလင်း မိုးချုပ်​ အချိန်​ကုန်​ ​နေတာ။ ​ငွေ​ရေစက်​​တွေ ဆိုတာကလည်း အလုပ်​လုပ်​ရ လွန်းလို့ ပျက်​လိုက်​တာ ခဏခဏ။
ကျွန်​​တော်​တို့ မောင်​နှမ​တွေ ဆိုရင်​လည်း ကြမ်းပြင်​​ပေါ် ကျ​နေတဲ့ ​ပိုက်ဆံ ​တွေကို တံမြက်​စည်းလှဲ၊ ​ဂေါ်ပြားနဲ့ ကျုံးပြီး အမှိုက်​ပုံး​ထဲ သွားပစ်​​ပေးတဲ့ အလုပ်​​လောက်​​တော့ ဝိုင်းကူ ရတာ​ပေါ့။ အိမ်​မှာ ဘာမှ မရှိ​တော့ ချမ်းရင်​လည်း ပိုက်​ဆံ​တွေပဲ ချုံအိပ်​ရတယ်​။ ပိုက်​ဆံပဲ ခင်းအိပ်​ ရတယ်​။ ​ဆောင်းတွင်းဆို ပိုက်​ဆံ​တွေ မီးရှို့ပြီး​တောင်​ မီးလှုံရတယ်​။ အိမ်​သာ တက်​ပြီး ရင်​လည်း အိမ်​သာသုံး စက္ကူ မရှိလို့ ပိုက်​ဆံနဲ့ပဲ သန့်ရှင်း​ရေး လုပ်​ရတယ်​။
ကျွန်​​တော်​ ​ကျောင်းသွားပြီ ဆိုရင်​ မုန့်​ဖိုး ​ပေးတဲ့ ပိုက်​ဆံကပဲ ​ကျောပိုးအိတ်​နဲ့ တစ်​လုံး။ ခင်​ဗျားတို့်​ပဲ စဉ်းစားကြည့်​​လေ။ ​ကျောင်းလွယ်​အိတ်​က တစ်​ဘက်​ ပိုက်​ဆံ အိတ်​ကြီးက တစ်​ဘက်​ ဆို​တော့ ဘယ်​လို အဆင်​​ပြေ မလဲ။ ဒီ​တော့ အိမ်​က လူကြီး​တွေ လစ်​တာနဲ့ နီးစပ်​ရာ အမှိုက်​ပုံတို့ ​ရေ​မြောင်း တို့ထဲကို ပစ်​ချ ခဲ့ရ တာ​ပေါ့။ ​ပေးလိုက်​တဲ့ ပိုက်​ဆံ ကုန်​​အောင်​ သုံးမလာ ရင်​လည်း အ​ဖေက ဆူ​သေးတာကိုး။
ပိုက်​ဆံ​တွေက ​ရေလို့ မနိုင်​​တော့ အ​ဖေက သိမ်းမထား ​တော့ဘဲ ​မြောင်းထဲ လွှင့်​ပစ်​တယ်​။ ​ရေ​မြောင်း​တွေ ပိတ်​ကုန်​လို့ ရပ်​ကွက်​က ဝိုင်း​ပြောတာနဲ့ မီးရှို့ပစ်​ရတယ်​။ ဒါလည်း ​အချိန်​ အကြာကြီး ရှို့ရလို့ စိတ်​မရှည်​​ တာနဲ့ ​နောက်​ဆုံး ဒိုင်းနမိုက်​ နဲ့ပါ ခွဲပစ်​ရတဲ့ အထိပဲ။ ကျွန်​​တော်​ဆို တခါတ​လေ ဖာရာရီတို့၊ လမ်​​ဘော်​ဂနီတို့ ဝယ်​ပြီး ပိုက်​ဆံ​တွေ ​ဖောက်​ခွဲတဲ့ အချိန်​မှာ ထည့်ပြီး ​ဖောက်​ခွဲတမ်း ကစား​တယ်​။
​နောက်​​တော့ အ​ဖေက ကျွန်​​တော့်​ကို ​ကျောင်းထုတ်​ လိုက်​တယ်​​။ ပညာ​တွေ တတ်​ရင်​ အရွယ်​​ရောက် ​လာတဲ့အခါ​ ပိုက်​ဆံ​တွေ ထပ်​ရှာ​နေမှာ စိုးလို့တဲ့။ ဒါဆို အခုထက်​ ပိုဒုက္ခ ​ရောက်​ကုန်​မှာ။ တစ်​ခါကလည်း အ​ဖေက သ​ဘောင်္ကြီး တစ်​စီးဝယ်​ပြီး အိမ်​က ပိုက်​ဆံ​တွေကို ကွန်​တိန်​နာ ​တွေနဲ့ ထည့်​တယ်​။ ​နောက်​​တော့ ပင်​လယ်​ထဲမှာ သ​ဘောင်္​ရော ကွန်​တိန်​နာ ​တွေပါ တမင်​ မြှုပ်​ပစ်​လိုက်​တယ်​။
အဲဒီရက်​ပိုင်း က​တော့ အိမ်​မှာ ပိုက်​ဆံ မမြင်​ရလို့ ​ပျော်​လိုက်​တာဗျာ။ ဒါ​ပေမယ့်​ သိပ်​မကြာပါဘူး။ တစ်​ပတ်​​လောက်​ ကြာ​တော့ အရင်​အတိုင်း ပြန်​ပြည့်​ သွားတာပါပဲ။ ကိုယ့်​ဘဝကိုယ်​ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ညဘက်​ ညဘက်​ ပိုက်​ဆံပုံ​ပေါ် ​မှောက်​ပြီး ကြိတ်​ငို မိတယ်​။ ဘဝ ဆက်​တိုင်း ဒီလို အဖြစ်​မျိုးနဲ့ မကြုံရ ပါ​စေနဲ့လို့လည်း ဘုရား ​ရောက်​တိုင်း ဆု​တောင်း မိတယ်​။ သူငယ်​ချင်း တို့လည်း ကျွန်​​တော့်​ ဘဝကို စာနာရင်​ ဖိုက်​တင်းလို့ မန့်​​ပေး သွား​နော်​။
(ဟိုးအရင်​က ဖတ်​ဖူးတဲ့ စာ​​ပြောင်​လေး တစ်​ပုဒ်​ကို မှတ်​မိ သ​လောက်​ ပြန်​​ရေးထား တာပါ။ မူရင်း ​ရေးသူကို ခရက်​ဒစ်​ ​ပေးပါတယ်​)
[email protected] THAW NAING
အသက်​​လေးဆယ်​နား နီး​နေ​ပေမဲ့ ကျမလှချင်​သလို လူတိုင်းလည်း လှချင်​ကြပါတယ်​
Posted on November 1, 2017 Author Cele
အသက်​​လေးဆယ်​နား နီး​နေ​ပေမဲ့ ကျမလှချင်​သလို လူတိုင်းလည်း လှချင်​ကြပါတယ်​ အသက်​​လေးဆယ်​​ကျော်​အမျိုးသမီးတချို့,ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုသန့်​သန့်​ရှင်းရှင်းသပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​နဲ့လှလှပပလေးများ​နေမိရင်​ဒီအသက်​အရွယ်​နဲ့လှချင်​​နေတုန်းလား? နောက်​တစ်​​ယောက်​​တွေ့​နေလို့လား? အသက်​ကြီးမှပိုလှချင်​​နေတာလား? ​နောက်​တစ်​​ယောက်​မရနိုင်​ဘူး​နော်​! စတဲ့ခနဲ့တဲ့တဲ့အ​ပြော​တွေ​အပြောခံရတဲ့အခါရှက်​ရွံ့ပြီး​နောက်​တစ်​ခါပြင်​ပြင်​ဆင်​ဆင်​​နေရမှာ တွန့်​ဆုတ်​လို့ဖြစ်​ကတတ်​ဆန်း​နေလိုက်​ကြပါ​တော့တယ်​ တစ်​ကယ်​ဆို,အ​တွေးအမြင်​နိမ့်​ကျတဲ့လူ​တွေရဲ့စကား​တွေကိုနား​ယောင်​​နေစရာမလိုသလိုမနာလိုစိတ်​ရှိတဲ့လူ​တွေရဲ့စကား​တွေကိုလက်​ခံ​နေဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ လှလှပပပြင်​ပြင်​ဆင်​ဆင်​နဲ့သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​​ နေထိုင်​ခြင်းဟာအသက်​အရွယ်​နဲ့မဆိုင်​သလို နောက်​တစ်​​ယောက်​ကိုရယူချင်​လို့​မျော်​မှန်း​နေလို့လည်းမဟုတ်​ပါဘူး။ တစ်​ကယ်​ကျ,အ​တွေးအမြင်​မရှိဘာမှမသိနားမလည်​တဲ့လူ​တွေကိုဒေါသဖြစ်​ရမယ့်​အစားသနားစရာ​တောင် ကောင်း​နေပါ​သေးတယ်​။ တစ်​ကယ်​က,သန့်​ရှင်းသပ်​ရပ်​မူနဲ့လှလှပပပြင်​ဆင်​​နေထိုင်​ခြင်းဟာ​ကိုယ့်​ရဲ့စိတ်​ကိုကြည်​လင်​လန်းဆန်း​ပေါ့ပါးမူ ဖြစ်​​စေသလို အလုပ်​လုပ်​ရာမှာလည်းတာဝန်​ယူနိုင်​စွမ်းရှိပြီးကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယုံကြည်​မူတိုး​စေတယ်​ဆိုတာအ​တွေးအ​ခေါ်မြင့်​မားသူ​တွေသာသိကြပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​အ​တွေးအမြင်​ကျဉ်း​မြောင်းပြီးဘာမှမသိနားမလည်​ပဲအောက်​တန်းကျကျစကား​တွေနဲ့သင့်​ကိုလာလို့ခနဲ့တဲ့တဲ့ ကဲ့ရဲ့လာပြီဆိုရင်​”ကျမသိပ်​လှချင်​ပါတယ်​”လို့သနားတဲ့အပြုံး​လေးပြုံးပြပြီး​ပြောလိုက်​ပါ။ တစ်​ခု​တော့ရှိပါတယ်​။ကိုယ့်​အသက်​အရွယ်​နဲ့လိုက်​ဖက်​တဲ့ပြင်​ဆင်​ချယ်​သမူမျိုး​တော့ဖြစ်​ရမှာ​ပေါ့​နော်​။ Nan Khin May Win မေသတင်းရပ်ကွက်လေး
Posted on December 23, 2017 Author Cele
Onlineကနေ Shoppingလုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။အိမ်ကနေတစ်ဖဝါးမှမခွာပဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို လှမ်းမှာလိုက်ရုံနဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရောက်ချလာတဲ့အပြင် အသစ်အသစ်သောအရာတွေကိုလည်း ခေတ်နဲ့အမီလိုက်ဝယ်နိုင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ထီလက်မှတ်ကံစမ်းသလိုပဲ အမြဲတမ်းလိုလိုတော့ ကံကောင်းမနေနိုင်ဘူးလေ။တစ်ခါတလေမှာ အချို့Online Shoppingတွေမှာ ကြော်ငြာထားတာကပုံစံတစ်မျိုး၊ရောက်ချလာတော့တစ်မျိုး၊ပေါင်းနှစ်မျိုး ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်များလည်း customerအားလုံးလိုလို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ဆိုတော့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြားထဲမှာပဲ အလှတရားအစစ်အပြင် အသစ်အနေနဲ့ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်အလွဲလေးတွေကို ထပ်မံစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.Idolပုံနဲ့ခြေအိတ်လေးမို့ မှာလိုက်မိပါတယ်.. Idolကိုသနားသွားတယ်… 2.50% saleချတယ်ဆိုလို့ ဖိနပ်တစ်ရန် မှာလိုက်မိပါတယ်.. အိမ်ကို တစ်ဖက်ပဲရောက်ချလိုက်တယ်.. 3.မသိဘူး မသိဘူး အော်ဒါမှာထားတဲ့မျက်မှန်နဲ့ တကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့မျက်မှန် ဘာလို့လွဲနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တကယ်မသိဘူး… 4.ဒီလိုလေး ကိုယ်မှာလိုက်တဲ့အတိုင်း တစ်ထပ်တည်းရလာတော့ ရယ်ရမှန်း ငိုရမှန်း ကိုယ်တကယ်မသိတော့ပါ. 5.မိသားစုလိုက်ခြုံဖို့မပြောနဲ့ တစ်ယောက်တည်းတောင် အနိုင်နိုင်ဘ၀ပျက်နေလောက်တဲ့ စောင်ကိုမြင်တိုင်း မှာလိုက်မိတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုပြန်ပြန်တွေးရင်း အရယ်မရပ်နိုင်သေးဘူး.. 6.ဒီလောက်ကတော့ […]
17 လ အကြာမှာ အမျိုးသမီးတဦးပုံစံ လုံးဝဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ ပြောင်းလဲမှု
17 လ အကြာမှာ အမျိုးသမီးတဦးပုံစံ လုံးဝဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုဓာတ်ပုံများ ပုံတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ တဖြေးဖြေးပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ 17 လ အကြာမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလုံးလုံး ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုမှာ မဟော်မုန်းများခဲ့ပြီး မိန်းမစိတ် ပြင်းထန်စွာ ပြောင်းလဲခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မိန်းမပိုဆန်လာပြီး မိန်းမစရိုက်တွေ ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို ပထမတော့ အထိတ်တလန့် ဆရာဝန်ကို ပြခဲ့ပေနယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီဘဝကို ပိုမိုပျော်ရွှင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူဟာ အသွင်ကူးပြောင်းဖြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ 16 နှစ်အထိ ယောက်ျားဆန်တဲ့ အပြုအမူသာရှိပြီး မိန်းမဆန်တဲ့ အရာ အရိပ်အမြွက်တောင် မရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပုံရိုက်ပြီး တလအကြာမှာ ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်တော့ သူ့ကို သတိထားမိတာ သူ့အသားအရေနဲ့ […]